August 2016 - Page2of 10 - चारदिशा
Monthly Archives: १३ भाद्र २०७३, सोमबार १३:४६
पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई प्रोस्टेट क्यान्सर, उपचार खर्च वापत ६० लाख दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । राज्यका बिशिष्ट ब्यक्तिहरुको उपचारमा कति खर्च हुन्छ त्यसको हिसाब किताब गरेर साध्य पनि छैन । अहिले मात्र राज्यका बिशिष्ट ३ ब्यक्तिहरु उपचारको लागि विदेशमा छन् । देशमा दक्ष चिकित्सक र प्रबिधि तथा अस्पताल नभएका होइनन् । तर वरिष्ठ नेता र विशिष्ट व्यक्तिहरुको विदेश मोह बढ्ने क्रम तीब्र... बिस्तृत
नासु श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु एक करोड १६ लाख ६९ हजार २८८ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा हुलाक सेवा विभाग, नेपाल फिलाटेलिक ब्युरो सुन्धाराका नासु मणिकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार नासु श्रेष्ठले दैनिक हुलाक टिकट बिक्रीबापतको रकम राजस्वमा... बिस्तृत
डा. महतलाई विदेशबाट बधाई
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले सुखद कार्यकालका लागि बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । गत शुक्रबार पदभारग्रहण गरेलगत्तै दिउँसो ३ बजे चिनियाँ राजदूत उ छुन्ताई आफ्ना विदेशमन्त्रीको बधाई तथा शुभकामना पत्र लिएर भेट्न पुग्नुभएको थियो । भेटका क्रममा उहाँले नेपाल... बिस्तृत
फेन्सी संघको तीज
नारायणगढ । महिलाहरुको एकता शक्ति हो र महिला शक्तिको सदुपयोग गरौं भन्ने नारा सहित नारायणगढका फेन्सी व्यवसायीहरुले तीज विषेश कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाली नारीहरुको हरितालिका तीजको अवसरमा फेन्सी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र फेन्सी व्यवसायी संघ चितवनको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो । सो अवसरमा... बिस्तृत
गोप्य पत्र सार्वजनिक गर्न एमालेको माग
काठमाडौं । सरकारले संबिधान संसोधनका विषयमा भारत सरकारसँग कुनै छलफल नभएको संसदलाई जानकारी गराएको छ । आजको संसद बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनबारे भारतसँग केही पनि कुरा नभएको दाबी गरेका हुन् । उनले संविधान संशोधनबारे भारतसँग कुराकानी गरेको भनेर फैलाइएको हल्ला निराधार भएको समेत बैठकमा बताए... बिस्तृत
अर्घाखाँचीको हंसपुरमा जीप दुर्घटना, ९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
अर्घाखाँची- अर्घाखाँचीमा जीप दुर्घटना हुँदा ९ यात्रुको मृत्यु भएको छ । हंसपुर गाविसमा ग १ ज ४८७८ नम्बरको जीप दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परेको फोरहृवील जीप हंशपुर गाविस ५ रतनमोर बजार नजिकै भीरबाट सात सय मिटर तल खसेको थियो । अहिलेसम्म दुर्घटना कसरी भयो र जिपमा सवार यात्रुसंख्या... बिस्तृत
साउथ अस्ट्रेलियाका मन्त्रीद्वारा योग कीर्तिमानी मोक्तान सम्मानित
काठमाडौं । साउथ अस्ट्रेलिया राज्यका बहुसंस्कृतिमन्त्री जोय बेटिसनले योग म्याराथनका विश्वकीर्तिमानी नेपालका उत्तम मोक्तानलाई सम्मान गर्नुभएको छ । त्यहाँ रहेका नेपाली भाषी भुटानी समुदायले अस्ट्रेलियाको एडिलेड शहरमा आयोजना गरेको एक भव्य कार्यक्रममा उहाँलाई सो सम्मान गरिएको हो । कीर्तिमानी मोक्तानलाई खादा ओढाई सम्मानपत्रले सम्मानित गर्दै मन्त्री बेटिसनले भन्नुभयो–“नेपालबाट योगमा... बिस्तृत
इटालीको भूकम्पमा मृत्युहुने २८१, जीवितै उद्वारको आशा म-यो
रोम । इटालीमा गएको बुधबार बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २८१ पुगेको छ । उद्वारको कार्य जारी रहेको छ र भूकम्पका कारण भग्नावशेषमा पुरिएका नागरिकलाई जीवितै उद्वारको प्रयास भने जारी नै छ । तर पनि इटालीको नागरिक प्रतिरक्षा विभागले शनिबार बिहान दिएको जानकारी अनुसार यसरी भग्नावशेषबाट... बिस्तृत
भक्तपुर । नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमाले देश र जनताको हितमा हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । युवा सङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी भक्तपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले संविधान गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले औचित्य, अभ्यास, अनुभव र आवश्यकताका आधारमा मात्र संशोधन... बिस्तृत
विश्वासका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध : परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सुरक्षित गर्दै विश्वासका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ । रिपोटर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले भन्नुभयो, “दुई छिमेकी मुलुकले गरेको विकासबाट हामीले फाइदा लिनसक्नुपर्छ, विश्वासका आधारमा आपसी सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर नै नेपाल समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।”... बिस्तृत